Ny alatsinainy 13 janoary 2019 hariva lasa teo teny akaikin’ny Sarin’i Masina Maria Andohalo dia lehilahy mpanendaka miisa telo no voasambotry ny polisy miasa mpandrindra ny fifamoivoizana. Teny amin’ny faritra « Sainte famille » Mahamasina no nanatanteraka ny asa ratsiny izy telo lahy ireto ary nirifatra nitsoaka. Niantso ireo polisy miasa izay nandrindra ny fifamoivoizana teny an-toerana avy hatrany ilay niharam-boina. Nandray ny andraikiny kosa ireto farany tamin’ny fanenjehana azy telolahy izay efa nitsoaka niakatra ny 416 hihazo an’Andohalo. Tratra teo akaikin’ny sarin’ny Masina Maria izy telolahy ireo ary nentina, natolotra ny polisin’ny CSP5 Mahamasina. Anio no hatolotra ny fampanoavana izy ireo ireto. Nirohotra tato ho ato ny fanendahana eto an-drenivohitra. Maro ireo lasibatra amin’ny toerana be olona sy ny toerana mangina.